Parade ekeresimesi na-aghọ ihe nhụsịrị mmadụ na Waukesha, Wisconsin
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akwụkwọ akụkọ USA » Parade ekeresimesi na-aghọ ihe nhụsịrị mmadụ na Waukesha, Wisconsin
News • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akwụkwọ akụkọ USA
Ọ malitere ịdị ka ekeresimesi mgbe ama ama Waukesha ekeresimesi ekeresimesi laghachiri na ngagharị ka otu afọ kwụsịtụrụ n'ihi COVID-19.
Ngagharị anya a tụgharịrị bụrụ nnukwu ihe mberede.
Waukesha Onye isi ndị uwe ojii kwuru na ihe karịrị mmadụ iri abụọ merụrụ ahụ Waukesha Ememe ekeresimesi na Wisconsin mgbe SUV gafere igwe mmadụ ndị sonyere na ngagharị.
Akụkọ na-ekwu na SUV nwere mmadụ 3 n'ime ụgbọ ala ahụ, na-akpalite awa ole na ole ka e mesịrị, ebe nchekwa mberede 911 dị na ebe ozi gbagoro na ekwentị mkpanaaka onye ọ bụla. Amabeghị ihe kpatara ya ugbu a.
Waukesha bụ obodo na oche mpaghara Waukesha County, Wisconsin, United States. Ọ bụ akụkụ nke obodo Milwaukee mepere emepe. Onu ogugu ya bu 70,718 na ngụkọ 2010. Obodo a dị n'akụkụ Obodo nta Waukesha.
A maara Waukesha dị ka mpaghara enweghị nchekwa ma nwee ọnụ ọgụgụ mpụ dị ala. "Ha bụ ezigbo mmadụ", ka onye akaebe kọwara ndị Waukesha." Ọ bụ akụkụ mara mma nke hụrụ ezinụlọ n'anya nke obodo ahụ."
O doro anya na onye uwe ojii gbapụrụ na windo SUV.
Ekwuwapụtala ihe a mere dị ka ihe nwuru ọtụtụ mmadụ.
Ọgbọ ụgbọ ihe mberede ọ bụla nọ n'obodo Wisconsin na-ebuga ndị merụrụ ahụ n'ụlọ ọgwụ. Ụlọ ọgwụ si n'obodo ndị ọzọ gbagara Waukesha iji nyere aka.
Dị ka akụkọ ọhụrụ a si kwuo, ọ dịghị egbe SUV, a pụghịkwa ekwenye ma ọ bụrụ na ihe a mere bụ ihe mberede ma ọ bụ mbuso agha.
Akụkọ ụfọdụ na-agbalị ime ka otu okwu ikpe a ma ama n'otu obodo dị nso nwee njikọ.
Akụkọ na-akwadoghị na-ekwu maka ọtụtụ ndị merụrụ ahụ. Ndị uwe ojii kwuru na echedoro ụgbọ ala ahụ na ha na-achọ onye nwere mmasị.
⚠️ eserese ịdọ aka ná ntị ⚠️
Waukesha, Wisconsin 🙏 Kedu ọgụ dị egwu. SUV na-akọ ala site na ndị na-eme njem na ndị nne ochie na-agba egwu 🤬 Akụkọ banyere mmadụ 2 nwụrụ na ọtụtụ ndị ọzọ merụrụ ahụ. Ndị uwe ojii achọpụtala SUV ma nwee 1 n'ime ndị nwere ike 3 ndị a na-enyo enyo n'ụlọ mkpọrọ. pic.twitter.com/uSYAfFOUZU
- Ugo na-enweghị atụ 🇺🇲 (@SonsOfMontesQ) November 22, 2021
ANITA ekwu, sị:
Ọnwa Iri na Abụọ 28, 2021 na 07:16
هل انت بحاجة الى قرض? Nkọwa nke Alتجارية قرض الشخصي? هل الائتمان الخاص بك سيئ? نحن جاهزون لنقدم لك القرض والتمويل الذي تحتاجه بفائدة 3٪ …
يرجى ملاحظة ما يلي: الحد الأدنى لمبلغ القرض لدينا هو 5000 دولار أمريكي, والقروض مجانية 100٪ (مخاطر).
November 22, 2021 na 20: 00